प्रहरीले किन गर्यो छात्रावासमा अनुगमन ? - Jhapa Online
प्रहरीले किन गर्यो छात्रावासमा अनुगमन ?
काठमाडौँ, २५ साउन । वानेश्वर क्षेत्रमा सञ्चालित होस्टल (छात्रावास) लाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सचेतनात्मक अभियान शुरु गरिएको छ ।
महानगरीय प्रहरी वृत बानेश्वरको अगुवाइ तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि, होस्टल एशोसिएशनका प्रतिनिधि, सामुदायिक सेवा केन्द्र र टोल सुधार समितिको संयुक्त टोलीले सो अनुगमन गरिएको हो ।
बानेश्वर तथा आसपास क्षेत्रमा सञ्चालित होस्टलमा विकृति देखिएको, अमर्यादित गतिविधि, होहल्ला, झैझगडा, दुव्र्यसनी सेवन आदिको जनगुनासो र उजुरीका आधारमा होस्टलको विकृति नियन्त्रण गर्न अभियान चलाएको बानेश्वर प्रहरी वृत्तका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्दराज काफ्लेले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
‘बानेश्वरको टोल–टोलमा प्रहरी अभियान’ अन्तर्गत होस्टलको संयुक्त अनुगमन गरिएको र त्यहाँ विकृतिजन्य क्रियाकलाप पाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
विभिन्न ३९ वटा कार्यक्रम लक्षित गरी तीन महिने अभियान गत साउन १ गतेदेखि शुरु भएको थियो । हालसम्म १० वटा कार्यक्रम सम्पन्न भएको वृत्तले जनाएको छ ।
अनुगमनमा अमर्यादित गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति र सञ्चालकलाई एक पटकका लागि सचेत गराएर छाडिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक काफ्लेले बताउनुभयो ।
होस्टललगायत अन्य क्षेत्रमा भएको विकृति हटाई मर्यादित समाज निर्माणको अभियानलाई निरन्तरता दिइने उहाँको भनाई छ ।
होस्टल एशोसिएशनको तथ्याङ्कअनुसार बानेश्वर क्षेत्रमा ३०० वटा होस्टल सञ्चालनमा छन् । विगतमा पनि ती क्षेत्रमा सञ्चालित होस्टलमा झैँझगडालगायत अमर्यादित गतिविधि भएको आधारमा प्रहरीले छापा मारेको थियो ।
“यति सानो क्षेत्र (बानेश्वर) आसपासमा किन चाहियो यति धेरै सङ्ख्याका होस्टल अन्य कुनै अमर्यादित गतिविधि पो हुने गरेको छकी भन्ने आशङ्का जन्माएको छ, यसको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउँछौँ,”– प्रहरी नायब उपरीक्षक काफ्लेले भन्नुभयो ।